10 Daaciyaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka | Talooyinka 2022
Bogga ugu weyn 10 Daaciyaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka | 2022
10 Daaciyaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka | 2022
Isha sawirka: www.amazon.cm
Marka, waxaad aad u xiisaynaysaa inta ay wacdiyayaashu kasbadaan. Waa caadi uun inaad ahaan lahayd, maadaama tirada kaniisadaha iyo xarumaha cibaadadu sii kordhayaan. In kasta oo hodannimada jannada aan baranno, wacdiyeyaal badan ayaa urursaday hanti adduun. Sidee faa'iido u noqon kartaa wacdinta? Jawaabta oo kooban: aad u macaash badan.
Maqaalkan, waxaan kuugu sheegi doonnaa tobanka ugu sarreeya wacdiyeyaasha ugu mushaharka badan adduunka, kaniisadaha, iyo qiimahooda saafiga ah.
Yaa Is The Hugu xun Pgargaar Pmacallin In The World
Kenneth Copeland waa daaciga ugu mushaharka badan adduunka. Iyadoo lagu qiyaasay lacag dhan $ 300 milyan ($ 300,000,000), wuxuu hadda ku jiraa liiska ugu sarreeya.
Sidee Much Do Megachurch Psoo gaadha Make?
Megachurch waa mid leh ugu yaraan 2000 caabudayaal toddobaadle ah. Sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay Shabakadda Hoggaaminta, celcelis ahaan wacdiyeyaasha megachurch waxay heleen inta u dhaxaysa $ 100,000 ilaa $ 140,000.
Xaqiijinta tan, XirfadrTrend wuxuu soo tebiyey celceliska mushaharka daaciga megachurch uu ka helo $ 147,000.
Tani waxay ka reebaysaa dheefaha iyo gunnooyinka kale ee ku soo kordhay boostada sida caymiska caafimaadka, kaalmada kirada guriga, gunnada safarka, iyo dheefaha kale.
10ka Daaciyadood Ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Maqaalkani wuxuu qaadan doonaa qalooc yar si uu ugala hadlo wadaadada ugu qanisan marka loo eego wadaaddada ugu mushaharka badan adduunka. Tani waa sababta oo ah, sida ku cad baadhitaankeenna, inta badan wacdiyayaashu ma helaan mushaharka kaniisadaha ay wadaad u yihiin.
Sidaa darteed, kuwan soo socda ayaa ah toban ka mid ah wacdiyaasha ugu mushaarka badan adduunka:
Wadaadka Chris Oyakhilome
Iyada oo lagu qiyaasay qiimaheeda saafiga ah ugu yaraan $ 300million, Kenneth Copeland waa daaciga ugu mushaharka badan adduunka.
Waa wacdiye Mareykan ah, af -hayeen dadweyne, iyo qoraa.
Wuxuu aasaasay Kenneth Copeland Evangelistic Association, oo markii dambe loo magacaabay Wasaaradaha Kenneth Copeland 1967.
Maanta, waa hogaamiyaha Wasaaradaha Kenneth Copeland halkaas oo uu ugu wacdiyo injiilka barwaaqada jameecadiisa iyo malaayiin raacsan.
Waxa uu leeyahay baabuur raaxo leh oo ay ku jiraan Cadillac Escalade wuxuuna ku socdaa gudaha limousines -ka.
Diyaaradda wasaaradda ka sokow, wuxuu leeyahay Citation 550 iyo Citation X. Injiilka barwaaqadu wuxuu u muuqdaa mid fidsan, miyaanay kula ahayn?
Kani waa wacdiyihii ugu hodansanaa uguna mushaarka badnaa adduunka.
Iyada oo lagu qiyaasay qiimahiisu yahay ugu yaraan $ 150 milyan, Bishop David Oyedepo waa daaciga ugu qanisan Nigeria iyo daaciga labaad ee ugu taajirsan adduunka.
Wuxuu leeyahay raxan baabuur oo raaxo leh, guryaha adduunka oo dhan, Diyaarad Bombardier Challenger, iyo laba diyaaradood oo Gulfstream ah.
Isagu waa aasaasaha iyo kormeeraha guud ee Living Faith Chapel International (Winners Chapel), guddoomiyaha Dominion Publishing House, iyo Ku-Xigeenka Madaxa laba jaamacadood oo gaar loo leeyahay oo ku yaal Nigeria-Axdiga iyo Jaamacadda Landmark.
Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale leeyahay Akademiyada Diinta iyo Dugsiyada Dhaxalka Boqortooyada. Wuxuu ku wacdiyaa injiilka rumaysadka wuxuuna leeyahay mid ka mid ah hoolka ugu weyn ee loo yaqaan “Taambuugga Iimaanka.”
Wuxuu mudan yahay $ 100 milyan, Marion Gordon “Pat” Robertson waa wariye telefishan, ganacsade, iyo qoraa. Isagu waa aasaasaha iyo guddoomiyaha Shabakadda Warbaahinta Christian (CBN) Inc, Guddoomiyaha Jaamacadda Regent, madaxa Hawlgalka Blessing International Relief and Development Corporation, iyo ururo kale oo badan.
Naadiga 700, oo uu Pat Robertson martigeliyo, ayaa celcelis ahaan daawadayaasha maalinlaha ah gaaraa 1 milyan oo Mareykan ah.
Sida wacdiyayaashii ugu horeeyey iyo labaad ee ugu taajirsan liiskayaga, Pat Robertson wuxuu leeyahay guryo waaweyn wuxuuna leeyahay baabuur raaxo leh - oo uu ugu caansan yahay Chevrolet Corvette. Wuxuu mar ahaa milkiilaha Learjet 35.
Joel Scott Osteen waa weriye telefishan Mareykan ah, wacdiye, iyo qoraa. Waxaa la sheegay inuu ugu yaraan qiimihiisu yahay 80 milyan oo doolar. Isagoo la wareegaya gogoshii hoggaanka kadib geeridii aabihiis, Pastor Joel Osteen wuxuu noqday hoggaamiyaha Kaniisadda Lakewood ee 1999.
Wuxuu madax u yahay Wasaaradaha Joel Osteen halkaas oo uu ku baahiyo wacdigiisa isagoo adeegsanaya warbaahinta kala duwan malaayiin raacsan iyo caabudayaal.
Qiimaha saafiga ah ee sareysa, la yaab ma leh in la sheegay inuu leeyahay ugu yaraan laba guri oo raaxo leh Texas iyo Ferrari 458 Italia.
Waxaa kaloo lagu xantaa inuu leeyahay dooni, marka lagu daro Airbus A319 oo qiimihiisu yahay $ 86 milyan.
La kulan daaciga 4aad ee ugu mushaarka badan dunida.
Toufik Benedictus “Benny” Hinn waa weriye telefishan Israa’iil ah, oo fadhigiisu yahay Ameerika, kuna caan baxay “Mucjisooyinkii Mucjisada”. Shirweynahiisii ​​waxaa si caalami ah looga baahiyaa barnaamijkiisa telefishanka “Tani Waa Maalintaadii”.
Benny Hinn wuxuu leeyahay qiyaas lagu qiyaasay $ 60 milyan. Wuxuu qoray daraasiin buugaag ah oo aad loo iibiyay, in kasta oo uu canaantay wacdiyeyaasha "injiilka barwaaqada", haddana waxaa lagu xantaa inuu ku nool yahay guri qiimihiisu yahay dhowr milyan oo doollar. Sida qiimahiisa saafiga ahi muujinayo, hubaal wuu barwaaqoobayaa.
6. Wadaad Chris Oyakhilome
Wadaad Chris Oyakhilome waa daaci reer Nigeria ah. Waa aasaasaha iyo hogaamiyaha Mu'miniinta Jacaylka Dunida ee la isku daray, oo sidoo kale loo yaqaan Safaaradda Masiixa.
Waxaa la rumeysan yahay inuu ugu yaraan qiimihiisu yahay $ 50 milyan. Wadaad Chris wuxuu leeyahay diyaarad khaas ah iyo raxan baabuur qalaad oo ay ku jiraan Bentley, Mercedes Benz, iyo Range Rover.
Wuxuu aad caan ugu yahay hadiyadaha baabuurta qaaliga ah. Kani waa wacdiyeyaasha kale ee ugu mushaarka badan adduunka.
7. Dollar Creflo
Creflo Augustus Dollar, Jr. waa weriye telefishan Mareykan ah iyo wacdiye. Wuxuu haystaa lacag dhan $ 39 milyan. Waa aasaasihii World Changers Church International.
Dollar ayaa sidoo kale madax u ah Ururka Wasiirrada Creflo Dollar (oo hore loogu yiqiinay Wasaaradaha Ballan -qaadka Caalamiga ah), Wasaaradaha Dollar Creflo, iyo Arrow Records.
Marka loo eego FairBiography, wuxuu haystaa laba Rolls-Royces, diyaarad khaas ah, iyo guryo qiimahoodu yahay malaayiin doolar.
Dollarka Creflo wuxuu caan ku yahay wacdinta injiilka barwaaqada. La yaab malaha halkaas.
Baadariga Enoch Adejare Adeboye, oo dadku u yaqaanaan “Daddy GO”, ayaa hantidiisa lagu qiyaasay $ 35 milyan. Waa daaci reer Nigeria ah iyo qoraa.
Isagu waa kormeeraha guud ee Kaniisadda Masiixiga ee la soo furtay ee Ilaah.
Iyada oo la tixraacayo jagadiisa, isaga iyo kolonyadiisa ayaa ku fuula baabuur aad u ammaan badan oo qaali ah. Sida lagu arkay Carmart, gawaaridiisa baabuurta waxaa ka mid ah Mercedes-Benz G-class oo qiimihiisu yahay $ 100,000, Rolls-Royce Phantom oo aan xabbaddu karin oo qiimihiisu yahay $ 400,000, iyo Land Rover Discovery oo qiimihiisu yahay $ 80,000.
Wuxuu kaloo leeyahay diyaarad Gulfstream iyo helicopter.
Waa mid ka mid ah wacdiyaasha ugu qanisan/ugu mushaarka badan adduunka.
Richard Duane “Rick” Warren waa wacdiye Ameerikaan ah oo wacdiye ah oo leh ugu yaraan $ 28 milyan.
Isagu waa kan ugu horumarsan uguna dhiirrigeliya ka -faa'iideystayaasha. Buugga ugu iibinta badan “Тhе Рurроѕе Drіvеn Lіfе” wuxuu ahaa guul caalami ah.
Waxaa la sheegaa inuu ku deeqay 90% hantidiisa, laakiin taasi weli lama xaqiijin. Isagu, si kastaba ha ahaatee, wuxuu wadaa gaari yar oo Ford ah. Ma aha baabuur aad u jaban, laakiin hubaal waa raqiis marka loo eego kuwa kale ee liiskan ku jira.
Sidoo kale akhri: Waa Kuwee Naqshadayaasha Ciyaaraha Fiidiyowga Ugu Lacagta Badan? | Dalalka Ugu Fiican
10. TD Jakes
Thomas Dexter Jakes Sr., oo caan ku ah TD Jakes, waa hoggaamiyaha kiniisadda Mareykanka, filim sameeyaha, iyo qoraa. Isagu waa hoggaamiyaha kiniisadda The Potter's House, megachurch ee Ameerika, oo leh qiimo dhan $ 20 milyan.
Wuxuu ku nool yahay gurigiisa Fort Worth oo qiimihiisu yahay $ 5.5 milyan.
Hal shay oo wacdiyayaashan ugu mushaharka badan adduunka ay ka siman yihiin ayaa ah inay yihiin hoggaamiyayaasha kaniisadaha megach. Lahaanshaha jameeco weyn oo iibsata buugaagtooda hubaal waxay leedahay kaalin weyn oo ay ku leedahay sidii loo noqon lahaa maalqabeen.
Kuwani waa Daaciyiinta ugu Mushaarka Badan Caalamka. Ma kula tahay si kale? Sanduuqa faallooyinka ayaa meel marin kara fikradahaaga iyo su'aalahaaga.
Dadka hantida leh
Guriga TD Jakes
SIDEE LOOGU SOO DIRAA KAARAHA HADIYADA INTERNETKA 2022
Kaararka hadyada waxaa sidoo kale loo yaqaan shahaadooyin hadiyadeed oo la siiyo dadka qaarkiis ee Waqooyiga Ameerika iyo foojarada hadiyadaha…
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Massachusetts Massachusetts 2021: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Massachusetts waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee ugu wanaagsan gobolka helitaanka raasamaal ganacsi. La yaab ma leh sababta wax badan…
Haddii aad tahay arday oo aad raadinayso goobo muusig oo aan la xannibin si aad ugu daawato muusigga dugsigaaga ama…
15 Software -ka Raadinta Xogta ugu Fiican 2022 | Faahfaahin Buuxda
Sida wakaalad suuqgeyn oo la socota xogta istiraatiijiyadooda suuqgeynta, waxaa jira wicitaan la sameeyo…
Tababarayaasha Kulliyadaha Laliska ee Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada kale ayaa si wanaagsan loo siiyaa mushahar wanaagsan iyo…